गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर १० जनाको मृत्यु, २ बेपत्ता, २ घाइते (अपडेट)
माधव अर्यालघनश्याम गौतम
गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर १० जनाको मृत्यु भएको छ भने २ जना बेपत्ता भएका छन् । जिल्लाको सत्यवती गाउापालिकाको २ वटा वडामा पहिरोले घर पुरिादा १० जनाको मृत्यु भएको हो ।सत्यवति गाउापालिकाको लिम्घामा ८ जना र ठुलो लुम्पेकमा २ जनाको मृत्यु भएको छ ।
पार्टी एकीकरण भएको एक वर्षपछि जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको सत्तारुढ नेकपाको २४ जिल्ला कमिटी सहइन्चार्जविहीन बनेको छ । जिल्ला कमिटीसरह मान्यता प्राप्त ६ महानगरसहित १८ जिल्लामा सहइन्चार्जहरु नतोकिएको हो ।
नेकपाले ६ महानगरसहित ७७ जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज र सह-इन्चार्ज तोक्यो (नामावलीसहित)
सत्तारुढ नेकपाले ६ महानगरपालिकासहित सबै जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज र सह-इन्चार्ज तोकेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले ७७ वटै जिल्ला इन्चार्ज र सह-इन्चार्जहरुको टुंगो लगाएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैठकले जिल्ला कमिटी सरह नै मान्यता प्राप्त ६ महानगरपालिकाका इन्चार्ज र सह-इन्चार्ज टुंगो लगाएको छ ।
भोलिसम्म भारी वर्षाको सम्भावना
श्रावण ४, २०७६
बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पयुक्त हावा र स्थानीय वायुको प्रभावले शनिबार देशका केही स्थानमा मध्यमदेखि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिणतिर रहेकाले मनसुनी गतिविधि देशैभरि सामान्य सक्रिय रहेको छ । मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिणबाट केही तल रहेकाले मनसुन पूर्ण सक्रिय हुन् अझै केही समय लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् गंगा नगरकोटीले बताइन् । अहिले मनसुन देशभरि नै सामान्य सक्रिय रहेको बताउँदै उनले पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली हुने पश्चिम क्षेत्रमा आंशिक तथा सामान्य बदली हुने जानकारी दिइन् ।
कैलाली घटनाको जिम्मा चन्द समूहले लियो
नेत्रविक्रम चन्द समूहले कैलाली बम विस्फोटन भएको जिम्मा लिएको छ । सेती महाकाली व्युरो इन्चार्ज निर्माणले विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीको कामको सिलसिलामा आत्म रक्षाका लागि बोकेका बम विस्फोट भएको उल्लेख गरेको छ ।
(अपडेट) बल्खु र कालीमाटी तरकारी बजारका १९ व्यापारीलाई जरिवाना
बल्खु र कालीमाटी तरकारी बजारमा शुक्रबार बिहान वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको टाेलीले अनुगमन गरेकाे छ । अनुगमनका क्रममा दुवै बजारका १९ व्यापारीलाई जरिवाना गरिएकाे छ ।
धनगढी विष्फाेट घटना : घाइते मध्ये एककाे मृत्यु
बिहीबार साँझ धनगढीको शहिदगेट नजिक निलम होटलमा भएको बिस्फोटकाे घटनामा घाइते मध्ये एकजनाको मृत्यु भएको छ ।
धनगढीको एक होटलमा विस्फोट, ५ जना घाइते
धनगढीको सहिद गेटनजिक रहेको निलम होटलमा बिहीबार साँझ विस्फोटन भएको छ । विस्फोटमा ५ जना घाइते भएका छन् ।
चन्द समूहलाई मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘छक्का पञ्जा गर्ने भए वार्ता हुँदैन’
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द समूहले छक्का पञ्जा गर्ने भए वार्ता नहुने बताएका छन् । ‘हामी वार्ता गर्न तयार छौँ, यो कुरा सरकारले धेरै पटक भनिसक्यो,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले भने,‘शक्ति सञ्चयका लागि वार्ता हुँदैन, पक्राउ परेका कार्यकर्ता छाड्नु पर्ने, मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने त्यसपछि उनीहरु वार्तामा आएनन् भने के गर्ने ? ।’ उनले छक्का पञ्जा गर्ने हिसाबले वार्ता नहुने स्पष्ट पारे ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाली तटबन्धकै कारण तराई–मधेस डुबानमा परेको बताएका छन् । उनले नेपाली तटबन्धलाई ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन नगरेका कारण डुबानको समस्या बढेको बताए ।
पीडितको समस्या नसुनी फर्कियो मन्त्रीको जम्बो टोली
बाढी प्रभावित जिल्लाको स्थलगत निरीक्षण गर्न आएका मन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्री सहितको टोली बुधबार पीडितलाई नभेटी राजधानी फर्किएको छ । उनीहरू हेलिकप्टरबाट आएर गौरको पुरेनवास्थित सेनाको गणमा स्थानीय प्रशासनसँग क्षति र बाढीको अवस्था बुझेर फर्किएका हुन् ।
सरकार र चन्द समूहबीच कहिले तात्छ वार्ताको तावा ?
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अर्धभूमिगत नेत्रविक्रम चन्द समूहबीच अनौपचारिक वार्ता सुरु भएको छ । सरकारसँग भने वार्ता सुरु भइसकेको छैन । चन्द समूहसँग कुनै न कुनै रुपमा वार्ता भइरहेको छ । नेकपाका नेताहरुले चन्द समूहका नेतासँग अनौपचारिक वार्ता गरिरहेका छन् । खासगरी भोजपुरमा चन्दका एक नेता र प्रहरी जवानबीच गोली हानाहानमा मृत्यु भएपछि यो अनौपचारिक वार्ताको सुरुवात भएको हो । औपचारिक वार्ताका लागि भने केही समय लाग्ने छ ।
गृहमन्त्री थापाले गरे बाढी ग्रस्त क्षेत्रको हवाई निरिक्षण
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बाढी ग्रस्त रौतहटको गौर लगायत तराइका क्षेत्रको बुधबार बिहान हवाई निरिक्षण गरेका छन् ।
वाग्मतीले लखेट्यो ४ सय परिवार
शुक्रबार राति बाढीले घर डुबाएपछि जसोतसो ज्यान जोगाएकी दुर्गाभगवती गाउँपालिका ५ बडहर्वाकी ६५ वर्षीया सरस्वती कोइरीको बायाँ खुट्टा भाँचिएको छ । बाढीबाट जोगिन भाग्ने क्रममा उनको खुट्टा भाँचिएको हो ।
सप्तरीबाट आश्रय खोज्दै उदयपुर
बाढीले विस्थापित ४८ परिवार तीन दिनयता उदयपुरको बुलबुले भमरा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको भवनमा आश्रय लिइरहेका छन् । त्रियुगा नदीको बाढीले सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिका–२ मा गाउँ नै डुबाएपछि उनीहरू सुरक्षित थलो खोज्दै बेलका नगरपालिका–१ भालमन्ती आइपुगेका हुन् ।
मौद्रिक नीतिका लागि बैंकका सीईओहरुको यस्तो छ सुझाव
निकै चासोका साथ हेरिएको आगामी मौद्रिक नीतिबारे कान्तिपुर दैनिकले ‘मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउन्डटेबल’ को आयोजना गर्‍यो । शुक्रबार साँझ राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल, १५ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाबीच छलफलको सम्पादित अंश–
वित्तीय क्षेत्र चाहन्छ स्थायित्व
यस वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअगावै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्नका लागि दबाबमूलक आह्वान गरिरहेको छ । नगाभे बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने घोषणापछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । तुलनात्मक रूपमा यसपटक निकै चासोका साथ हेरिएको आगामी मौद्रिक नीतिबारे कान्तिपुर दैनिकले ‘मौद्रिक नीति विशेष कान्तिपुर राउन्डटेबल’ को आयोजना गर्‍यो । शुक्रबार साँझ राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल, १५ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अर्थशास्त्री र सरोकारवालाबीच छलफलको सम्पादित अंश–
बाढीले दुईको मृत्यु एक वेपत्ता, सदरमुकाम गौर अझै डुबानमा
लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी गौर ३ टिकुलियाका शिवमंगल राउत पटेल र ईशनाथ १ बन्जरहाका हरेन्द्र राय यादवको शनिबार साझ मृत्यु भएको छ । बाढीले बगाएर दुवैको मृत्यु भएको हो । एक बेपत्ता छन् ।
अवधेशकुमार झाशिव पुरीशंकर आचार्यमधु शाही
सप्तरी, रौतहट, पर्सा, बारा र बाँकेका सीमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी रूपमा बनाएको बाँधलगायत संरचना र निकासमा पुर्‍याएको अवरोधले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको छ । भारतीय पक्षले सप्तकोसीको बहावलाई नियोजित रूपमा पश्चिमतर्फ फर्काउँदा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका ३ सय परिवार विस्थापित भएका छन् ।
भारतीय च्यानलका कारण डुबान
भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा सप्तकोसी नदीको धारलाई पश्चिमतर्फ फर्काउँदा सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका विभिन्न वडा डुबानमा परेका छन् । कोसीको पानी बस्तीमा पसेपछि करिब ३ सय घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।
दुई खोलाको भँगालोबीच १० जना अलपत्र, एकजना बेपत्ता
उदयपुरको चौदण्डीमा खोलाको भंगालोबीच १० जना अलपत्र परेका छन् । चौदण्डीगढी नगरपालिकास्थित कालीखोला र लामा खोलाको दोभाननजिक सञ्चालित क्रसरमा काम गर्ने मजदुर अलपत्र परेका हुन् ।
त्रियुगा नदीको बाँध फुटेर पाँच सय घर डुबानमा
चार दिनदेखि आएको निरन्तर वर्षाका कारण उदयपुरको बेलका नगरपालिका–१ तपेश्वरीमा आज बिहान त्रियुगा नदीको बाँध फुट्दा तपेश्वरी क्षेत्रका पाँचसय भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् ।
मकवानपुरमा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुग्यो
अबिरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोका कारण मकवानपुरमा मृत्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ । मकवानपुरको थाहानगरपालिका, इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिकामा खोला र भेलले बगाएर तीजनाको मृत्यु भएको हो ।